कम्पनीहरूको चाडपर्व लक्षित योजना र छूट
दशैं, तिहार लगायत चाडपर्वमा कम्पनीहरूले आप्mनो सेवाको प्रयोग र वस्तु खरीद गर्दा विभिन्न छूट दिने परम्परा नै बनिसकेको छ । यो समयमा मानिसहरू लुगाफाटोदेखि नयाँ सामान जोड्न चाहने हुँदा व्यापारी तथा कम्पनीहरूले छूटका विभिन्न योजना ल्याउँछन् । असोज नलाग्दै व्यवसायी, व्यापारी र कम्पनीहरूले दशैं विशेष अफर घोषणा गरेका छन् ।
विभिन्न शपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, मोबाइल पसल, कपडा पसल, मदिरा पसल लगायतले दशैंलाई लक्षित गरी सहुलियत दिने गरेका छन् । यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी, अटो कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनीले पनि विशेष योजना ल्याएका छन् ।
भायानेट कम्युनिकेशनका कार्यकारी निर्देशक विनय बोहोराले कम्पनीको अफरले ग्राहक लाभान्वित हुने बताए । कुनै कम्पनीले भने विदेश भ्रमण, लक्की ड्र, क्यासब्याक जस्ता उपहार समेत दिँदै आएका छन् । नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम वल्र्डलिंक, भायानेट र सुबिसु, टेलिभिजन सेवाप्रदाक डिसहोम केवल टेलिभिजन सेवाप्रदायकले ग्राहक लक्षित गरी डाटा तथा भ्वाइस, सीमित समयका लागि कम्पनीको सेवा लिँदा भारी छूट जस्ता अफर ल्याएर ग्राहकलाई लोभ्याइरहेका छन् ।
विशेषगरी नेपालका तीन ठूला टेलिकम कम्पनीले भ्वाइस र डेटा प्याकमा विशेष अफर ल्याएका छन्, जसमा एनसेलले ‘मेरो प्लान’ नामक योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो योजना अन्तर्गत ग्राककले २५४ दशमलव १० रुपैयाँको १ जीबी डेटा भोल्युम लिन सक्नेछन् । यस्तै एनसेल नेटवर्कभित्र कल गर्न त्यस्तै ग्राहकले ३८१ दशमलव ७९ रुपैयाँमा ३ जीबी डेटा भोल्युम भएको नेट भ्वाइस सेवा लिन सक्नेछन् । यसको डेटा समयअघि सकिएमा १२७ दशमलव ६९ रुपैयाँमा थप २ जीबी प्याक पाइन्छ भने ६४ पैसामा एनसेल नेटवर्कभित्र एसएमएस पठाउने सुविधा छ ।
त्यस्तै नेपाल टेलिकमले पनि जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइलमा अनलिमिटेड भ्वाइस र अनलिमिटेड एसएमएस सेवाको योजना ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार ६०० रुपैयाँमा १५ दिन समयावधिका लागि प्रत्येक दिन २ जीबी प्याक उपलब्ध गराइनेछ । सो प्याक अन्तर्गत १ जीबी पिक आवर (बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म) र १ जीबी अफपिक आवर (राति १० देखि बिहान ६ बजेसम्म) प्रयोग गर्न सकिन्छ । भ्वाइस प्याक अन्तर्गत ६ रुपैयाँमा निरन्तर ६० मिनेट कुरा गर्न सकिन्छ । यी अफर भने असोज २४ देखि कात्तिक ७ गतेसम्म उपलब्ध हुनेछ । टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा टेलिकमको दशैं तिहारको योजना फरक र सस्तो रहेको दाबी गरिन् ।
स्मार्ट (टेलिकम) सेलले दशैं तिहारको अवसरमा भ्वाइस, डेटा र एसएमएसमा आधा दर्जन अफर ल्याएको छ । सोमवारदेखि नै नयाँ सिम किन्दा, एमएमएस गर्दा तथा डाटा प्रयोग गर्दा यी अफर लागू हुने कम्पनीले बताएको छ ।
नयाँ सिम कार्ड किनेर गरिने पहिलो रिचार्जमा ग्राहकलाई स्मार्टदेखि स्मार्टमा कल गर्दा प्रतिसेकेन्ड एक पैसा र स्मार्टबाट अन्य नेटवर्कमा फोन गर्दा प्रतिसेकेन्ड दुई पैसा लाग्नेछ । पहिलो रिचार्ज ९० दिनसम्म उपयोग गर्न सकिनेछ । ग्राहकलाई १०० एमबी डाटा र १०० एसएमएस ३० दिनसम्म स्मार्टबाट सबै नेटकर्वमा निशुल्क उपलब्ध हुने पनि कम्पनीले बताएको छ । अनलिमिटेड अफर अन्तर्गत ९७ रुपैयाँको प्याक किनेपछि ३० दिनसम्म, ५७ रुपैयाँको प्याक किनेपछि १५ दिन र ३७ रुपैयाँको प्याकले १ सातासम्म चाहेजति कुरा गर्न सकिने जानकारी कम्पनीले दिएको छ ।
स्मार्टसेलले १९९ रुपैयाँको भ्वाइस प्याक किन्दा ५०० मिनेट कुरा गर्न पाउने अर्को अफर पनि ल्याएको छ । यस्तै रिचार्ज कार्ड खरीद गर्दा १० देखि ३५ प्रतिशत बोनस पाइनेछ ।
इन्टरनेट सेवाका अफर
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले ल्याएको अफरमा एउटा टीभी दिने योजना छ । यसमा ग्राहकले १ वर्षसम्म २५ एमबीपिएस इन्टरनेटका साथ ३२ इन्चको सीजी एलईडी टीभी र निःशुल्क नेटटीभी सेवा २५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँमा पाउनेछन् । अर्थात् ग्राहकले वर्षभर इन्टरनेट, नेटटीभी र ३२ इन्चको सीजी एलईडी टीभी पाइनेछन् । यसका लागि ग्राहकले २५ हजार ९९० रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्ने बताइएको छ ।
‘भायानेट दशैं तिहार टीभी उपहार’ अफरमा ग्राहकले अतिरिक्त स्पीडको इन्टरनेट र २३० भन्दा बढी च्यानल भएको नेट टीभीको साथ स्काइवर्थको ३२ र ४० इन्च टीभी छूटमा पाउनेछन् । ५० एमबीपीएस स्पीडको इन्टरनेट र २३० भन्दा बडी च्यानल भएको नेटटीभीसँगै ३२ इन्च टीभीको मूल्य २५ हजार ९९० पर्नेछ ।
सुबिसुले १ महीनाका लागि ९९ रुपैयाँमा टीभी वा इन्टरनेट सेवा दिने अफर ल्याएको छ । यसमा ३० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा ९९ रुपैयाँमै पाइने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै यही अफरमा ग्राहकले क्लियर टीभी प्रिमियम प्याकेज पनि ९९ रुपैयाँमै पाउनेछन् । यो टीभी प्याकेजमा ७५ भन्दा बढी एचडी च्यानलसहित २७५ डिजिटल च्यानल हुनेछन् ।
ई–कमर्शमा ९० प्रतिशतसम्म छूट
अनलाइन शपिङ साइट दराज डटकमले गाडी र मोटरसाइकल पनि विक्री गर्ने भएको छ । सिप्रदी ट्रेडिङसँगको सहकार्यमा दराजले सुपथ मूल्यमा नेपालभर टाटा टियागो गाडी बेच्ने भएको छ । यो गाडीको शुरुआती मूल्य रू. २० लाख ९५ हजार छ ।
दराजले यसअघि नै मोटरसाइकल विक्री गरिरहेको छ । कम्पनीले टीभीएस मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरूमा आकर्षक अफर ल्याएको छ । टीभीएस अपाचे आरटीआर १८० २भी किन्दा ग्राहकले ३२ इन्चको टीभी सित्तैमा पाउनेछन् । त्यस्तै आरटीआर ३१० किन्दा २५ हजार नगद छूट पाउनेछन् । साथै हेलमेट, पन्जा तथा कभर पनि निःशुल्क दिइने कम्पनीले बताएको छ ।
भदौ २७ देखि असोज १५ सम्मका लागि इकमर्श साइट सस्तो डिलले ‘दशैंको बेला, सस्तो डिलको मेला’ नाममा अफर खुला गरेको छ । मेला अन्तर्गत सस्तो डिलले घरायसीदेखि विविध इलेक्ट्रोनिक सामानमा ९० प्रतिशतसम्म छूट सहितका अफर ल्याएको छ ।
इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीका योजना
सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सकले पनि फेस्टिभ अफर ल्याएको छ । कम्पनीका टीभी, वासिङ मेशिन तथा फ्रिज जस्ता उपकरण खरीदमा विशेष अफर छन् । ‘सामसङ आयो, खुशी छायो’ योजनामा विशेष छूट पाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि तथा त्रिवेणी व्यापार प्रालिका नेपालभर रहेका आधिकारिक डिलर नेटवर्क अन्तर्गतका वितरक मार्फत यो योजना असोज १ गतेदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म रहनेछ ।
इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सीजीले चाडपर्व अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ‘सीजीसँग उत्साह उमंग, थाइल्यान्ड जाऊँ परिवारसँग’ नामक स्किम ल्याएको हो । यो अफर अन्तर्गत टीभी र रेफ्रिजिरेटरको खरीदमा २९ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक पाउन सकिने बताइएको छ । यस्तै लक्की ड्रमार्फत बम्परमा ५ भाग्यशाली जोडी थाइल्यान्ड घुम्ने अवसर पाउनेछन् ।
मोबाइल किन्दा विदेश भ्रमणको अवसर
मोबाइल ब्रान्ड हुवावेई नेपालले दशैंलाई लक्षित गरेर विभिन्न अफर सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार ग्राहकले हुवावेई फोनको खरीद गरी एउटा प्रतियोगितामा सहभागी भएर हुवावेई स्मार्ट स्केल, बाली भ्रमण (४ रात/५ दिन) वा थाइल्यान्ड भ्रमण (४ रात/५ दिन) जित्ने मौका प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको छ । दशैं यस्ता विभिन्न अफरले कम्पनीहरूको व्यापार अन्य समयभन्दा ४० प्रतिशत बढी हुने बताइन्छ ।
त्यसैगरी ग्राहकले शाओमीको नयाँ स्मार्टफोन रेडमी ७, रेडमी वाई ३, रेडमी रेडमी नोट ७, एमआई ए३ र रेडमी ७ ए किन्दा आकर्षक अफर पाउने सम्बन्धित कम्पनीले बताएको छ । ग्राहकले १९ हजार ९९९ मा रेडमी नोट ७ (३ जीबीप्लस ३२ जीबी) खरीद गर्दा २ हजारको समान छूट पाउनेछन् । शाओमीले नेपालमा एमआई ए३ (४ जीबीप्लस ६४ जीबी) र (६ जीबीप्लस १२८ जीबी) २३ हजार ९९९ र २७ हजार ९९९ मा उपलब्ध गराएको छ । रेडमी ७ ए (२ जीबीप्लस ३२ जीबी) १० हजार ९९९ मा उपलब्ध हुने बताइएको छ । यी अफरहरू सम्पूर्ण अफलाइन स्टोर, दराज डट कम डट एनपी र सस्तोडिलमा उपलब्ध हुनेछ ।
अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजनामा ढिलाइ : डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पछि धकेलिने संकेत
रू. ४० करोड लगानीमा सेट–टप बक्सको उत्पादन शुरू
दुई टेलिकम कम्पनीले भित्र्याए साढे ४ अर्बका दूरसञ्चार उपकरण
एनसेल लाभकर विवाद : एनसेलले २१ अर्ब १० करोड कर तिर्नुपर्ने
तार भूमिगत गर्न टेलिकमसँग कार्यविधि माग 
नेपाली ब्रान्डका सामानबाटै तयार हुन्छ घरभित्रै आधुनिक बाथरुम[२०७८ मंसिर, १७]
घरको शान्त वातावरण र सुन्दरतामा सहयोगी एक्वारियम[२०७८ मंसिर, १७]
स्टार्टअपका लागि दीर्घकालीन सोचसहितको नीतिगत व्यवस्था हुँदै छ[२०७८ मंसिर, १६]
सरकारी संयन्त्रहरू स्टार्टअपलाई सघाउन तयार छन्[२०७८ मंसिर, १६]
नेपालको स्टार्टअपमा लगानीको अभाव छ : लिनो अहलरिङ, स्टार्टअपको सफलताका लागि डिजिटलाइजेसन : अञ्जनी फुयाल[२०७८ मंसिर, १६]